China Polyethylene Glyeol 200 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Ukwenziwa kweMichiza: i-ethylene oxide condensate
Ingcaciso: I-PEG200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Izicelo eziphambili: Ulwelo lomlomo
Isetyenziselwa isisombululo somlomo kunye nezinye izinyibilikisi ezingamanzi, ngakumbi ine-solubilization elungileyo yepropolis equlathe kuthotho lweemveliso zonyango, umzekelo, ipropolis yomlomo, iipilisi ezithambileyo njalo njalo.
Indlela Ukupakisha: 50kg igubu zeplastiki
I-Polyethylene glycol inokwahlulwa ibakala lokuxuba amayeza, ibanga lezithambiso, ibakala lokutya kunye nenqanaba lezemveliso.
I-Polyethylene glycol kunye ne-polyethylene glycol ene-acid ester isetyenziswa ngokubanzi kushishino lwezithambiso nakwishishini lamayeza. Ngenxa yokuthamba, ukufuma, ukunyibilika kwamanzi, ukunyibilika kwamanzi, i-hydrophilic njalo njalo. Amaqhekeza obunzima beemolekyuli ezahlukileyo ze-polyethylene glycol anokukhethwa ukuba atshintshe i-viscosity, hygroscopicity kunye ne-microstructure yemveliso. I-Polyethylene glycol (Mnu <2000) enobunzima obuncinci beemolekyuli zilungele ukumanzisa iiarhente kunye nolawulo lokungaguquguquki. Isetyenziselwa ukhilimu, into yokuthambisa, intlama yamazinyo kunye nokucheba cream Ikwasebenza nakwimveliso yeenwele engakhange ihlanjwe, inika iinwele ukubengezela okuqaqambileyo. I-Polyethylene glycol (Mnu 2000) enobunzima obuphezulu beemolekyuli ilungile kwimilebe yomlomo, intonga yokuhambisa, isepha, isepha yokucheba, isiseko kunye nezithambiso Phakathi kweearhente zokucoca, i-polyethylene glycol ikwasetyenziswa njengearhente yokumisa kunye ne-arhente yokuqina. Kushishino lwamayeza, isetyenziswa njenge matrix yeoyile, i-emulsion, ioyile, into yokuthambisa kunye ne-suppository. Intengiso ye-polyethylene glycol (umz. I-polyethylene glycol, i-NF, i-Dow Chemical Co.) ilungele izithambiso. Ukusetyenziswa kwe-methoxypolyethylene glycol kunye ne-polypropylene glycol kuyafana ne-polyethylene glycol.
I-Polyethylene glycol isetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo amayeza amaninzi, anje ngenaliti, amalungiselelo asemxholweni, amalungiselelo e-ophthalmic, amalungiselelo omlomo kunye namalaphu. Ibanga eliqinileyo le-polyethylene glycol linokongezwa nge-polyethylene glycol engamanzi ukulungelelanisa i-viscosity yeoyile yamafutha; Umxube we-polyethylene glycol unokusetyenziswa njenge-matrix ye-suppository; Isisombululo esinamanzi se-polyethylene glycol sinokusetyenziswa njengoncedo lokumiswa okanye ukulungisa i-viscosity yezinye izinto zokumiswa; I-polyethylene glycol kunye nezinye i-emulsifiers zingasetyenziselwa ukwandisa uzinzo lwe-emulsion. Ukongeza, ikwasetyenziswa njengesixhobo sokuthambisa kunye nefilimu yokutyabeka.
Ulwelo olungenambala olukhanyayo
Egqithileyo Zonke iinkonzo ze-intanethi
Okulandelayo: IPolyethylene Glyeol 400